Iivesi ezikhuthazayo: Ngamaxesha Anzima Kakhulu?
Zonke izidalwa eziphilayo zidla ngokuchitha ixesha lobunzima, nokuba kungenxa yokugula, iingxaki zosapho okanye nayiphi na enye imeko enokuvela. Ngala maxesha sinokubona ezinye iivesi zemood ngamaxesha anzima ebhalwe kwizibhalo ezingcwele ukuze sizilungele phakathi kwamaxesha obunzima obunzulu.
Ilizwi likaThixo laliphefumlelwe nguBawo Osezulwini onguThixo owayesebenzisa njengezixhobo ngokuthe tye amadoda azigcina izamkelo zakhe kwaye wakhonza kwaye wamlandela kwaye yiyo loo nto yonke le mibhalo singayifumana kuloo ncwadi ingcwele inokusinceda kuyo yonke amaxesha siyayifuna.
Kukho izicatshulwa kule ncwadi ingcwele ezibonakala zibhaliwe ikakhulu kuthi, kufuneka nje silungele ukuzijonga kwaye bona, bekhokelwa nguMoya oyiNgcwele kaThixo, bayakufika kuthi kwaye banike umphefumlo wethu intuthuzelo, amandla nayo yonke into. ukuba kufuneka sikwazi ukujongana nemeko yethu kwaye singaya phambili. Nazi izicatshulwa zebhayibhile okanye iivesi zokukhuthaza ukuze ukwazi ukufunda ngamaxesha anzima.
1 1. Kholosa ngoThixo
3 3. Ungaze uyeke ukulwa
4 4. Vakalisa ukuba womelele
5 5. UThixo anincede kuyo yonke into
6 6. UThixo akasayi kuze akulahle
7 7. Kholwa kwiNkosi
8 8. Kholelwa kumandla kaThixo
9 9. Hlala ngoxolo
10 10. Lwela ulonwabo
11 11. Phumelela uthando kwabanye
12 12 Yomeleza intliziyo yakho
13 13. Landela umendo weNkosi yethu
1. Kholosa ngoThixo
1 KwabaseKorinte 10:13 ” Akukho sihendo sinifikileyo esingaqhelekanga ebantwini; Uthembekile ke uThixo, ongayi kuvumela ukuba ulingwe ngaphezu koko unokukuthwala; owesilingo kanjalo uya kunika indlela yokuphuma, ukuze ube nako ukuxhathisa.
Kufuneka sithembele ukuba uThixo olungileyo usinike indlela yokuphuma kobu bunzima sinokuthi sidlule kubo. Uyazazi iintliziyo zethu kwaye naphakathi kwamaxesha anzima sinokuhlala singaboni kwaye singakwazi ukubona ukuphuma kwethu nokuba sinako phambi kwamehlo ethu, lelo lelona xesha apho kufuneka sithembele kuThixo kwaye sifumane uxolo oluncinci kuye ukuba siyayiqaphela indlela yokubaleka asinike yona.
Duteronomi 32: 6 Asinguye utata wakho owakudalayo? Wenzile, wakumisa.
Yena, uThixo uSomandla, ngutata wethu kwaye njengoko emhle uhlala esihoyile. Usazi ukusukela ngaphambi kokuba sisesibelekweni sikamama kwaye yiyo loo nto engoyena mncedi sinokuba naye, ngakumbi kulaa maxesha xa sicinga ukuba el mundo iphezu kwethu. Ungutata wethu kunye nomdali, uyasikhathalela.
3. Ungaze uyeke ukulwa
Hebhere 11: 32-34 Kwaye yintoni enye endiyithethayo? Kuba ixesha liza kuncipha xa ndabalisela uGidiyon, uBharaki, uSamson, uYifeta, uDavide, kunye noSamweli nabaprofeti; bathi ngokholo boyisa izikumkani, benza okusesikweni, bafikelela kwizithembiso, bagubungela imilomo yeengonyama, bacima imililo engacimekiyo, bathintela ikrele, bathimba amandla obuthathaka, bomelela emfazweni, basaba kwimikhosi yasemzini.
Kufuneka sicinge ukuba njengokuba la madoda kaThixo aphumelele uloyiso, nathi siya kulufezekisa. Babengafezekanga kwaye badlula kwiimeko ezinzima kodwa bazaliswa nguThixo kwaye ngenxa yoko banokubuyela kwimeko yesiqhelo, ukholo lunokusinceda ukuba sibe noxolo naxa sidlula kuqhwithela olukhulu.
4. Vakalisa ukuba womelele
1 Petros 3:12 Kuba amehlo eNkosi aphezu kwamalungisa, neendlebe zayo zisingisele kwimithandazo yabo. Ubuso beNkosi bunxamnye nabenzi bobubi.
Ukukholwa yinto esikhokelela ekubeni sikholelwe ukuba ukulungele ukumamela yonke imithandazo yethu, ngakumbi ezo sizenzayo phakathi kwamaxesha obunzima. UThixo uyasiva kwaye usizalisa ngamandla akhe ukuze sibe nesibindi kwaye singatyhafi phakathi kobunzima.
5. UThixo anincede kuyo yonke into
2 kwabaseKorinte 4: 7-8 Ke kaloku obu butyebi sibuphethe ngezitya zodongwe, ukuze ukuqaqamba kwamandla kubonakale kuThixo, ingekuye kuthi, thina bakhwankqisiweyo yiyo yonke into, singakhathazeki; sisengxakini, kodwa singanqweneli. ”
Kule tekisi sinokubona ukuba umntu uhlala ehamba ngeembandezelo, kodwa ukuba kuThixo ezo zixinzelelo azisiphosi kuzola nokuzithemba kuThixo kodwa zisigcina sikhuphe konke ukubandezeleka kunye nokuphelelwa lithemba. SinoThixo ngaphakathi kuthi kwaye amandla akhe asenza somelele ngamaxesha onke.
6. UThixo akasayi kuze akulahle
Efese 6: 10 Elokugqiba, bazalwana, yomelelani eNkosini, nasekuqineni kokomelela kwayo.
Esi sisimemo esicacileyo sokomeleza iNkosi yethu, oku kufuneka kube yinto ephambili yethu phakathi kobunzima nangamaxesha onke. Khumbula ukuba uThixo ungumnikezeli wamandla ethu ngexesha esilifunayo. Masingatyhafi kodwa endaweni yoko, masithabathe amandla kuThixo ngokwakhe siqhubeke.
7. Kholwa kwiNkosi
I-Psalm 9: 10 Abo balaziyo igama lakho baya kukholosa ngawe,
Ngenxa yokuba wena, Thixo, akubashiyanga abo bakufunayo.
Kule tekisi sibona ukuba kuqala kufuneka sizixhalabise ngokwazi igama leNkosi elinamandla kwaye, ngalo mzuzu, singazihlukanisi naye. Le ndumiso sisithembiso sokuba uThixo ngokwakhe akasayi kumyekela lowo amfunayo, ke masifune iNkosi kwaye siyohlala sikhuselekile.
8. Kholelwa kumandla kaThixo
Efese 3: 20 "Kwaye kuLowo unamandla okwenza zonke izinto ngakumbi ukuba sizicacele okanye siziqonda, ngokwamandla asebenza kuthi."
Sinokuqiniseka ukuba uThixo unamandla, kwanezo zinto sicinga ukuba azikho isicombululo. Usithembisa ukuba kanye njengokuba kunamandla ukudala zonke izinto, kuya kuba njalo ngakumbi ukuphendula esikucelayo nangaphandle kokuba siyakuqonda okanye asiqondi.
9. Hlala ngoxolo
UMika 7: 8 “Wena lutshaba lwam, musa ukundivuyelela, kuba nangona ndiwile nje ndiza kuvuka. Nokuba ndihleli ebumnyameni, uThixo uya kuba kukukhanya kwam ”.
Lo ngumbhalo othetha ngekamva lethu, usixelela ukuba nangona siba nexesha elibi kwaye iintshaba zethu zonwabile kwiingxaki zethu, uThixo uyakuhlala engamandla ethu okuvuka, ekukhanyeni kwethu ukuba phakathi kobumnyama, silandele Khanyisa indlela ukuze singakhubeki.
10. Lwela ulonwabo
UMateyu 28:20 Nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endikuwisele umthetho ngazo; kwaye qaphela, mna ndinani yonke imihla, kude kube sekuphelisweni komhlaba. Amen.
Esi sisithembiso. Le ndoda isicela ukuba sizigcine zonke iimfundiso zayo kwaye ke isiqinisekisa ukuba iya kuba yinkampani yethu de kube sekupheleni komhlaba. Kula maxesha sithandaza ukuba siphelelwe amandla, isibindi kunye nokholo, khumbula ukuba uhlala enathi.
11. Phumelela uthando kwabanye
Hebhere 4: 14-16 “Ke ngoko, sinombingeleli omkhulu omkhulu owahlaba amazulu, uYesu Nyana kaThixo, masiwugcine umsebenzi wethu. Kuba asinambingeleli omkhulu ungenako ukuvelana nobuthathaka bethu, kodwa owalingwa kuyo yonke into ngokokufana nathi, kodwa engenasono. Masize ke ngokuqiniseka kwitrone yobabalo, ukuze sifumane inceba, sifumane ubabalo loncedo olufanelekileyo.
Simele sikhumbule ukuba uYesu ngokwakhe utyiwe emhlabeni kwaye wabandezeleka kwinyama yethu yonke ukugula kwethu, uyasiqonda phakathi kwento esinokuhamba kuyo aze asibabale. Masihlale sisondele kuye kwaye siyonwabele inkathalo yakhe nothando olungapheliyo ebomini bethu.
12 Yomeleza intliziyo yakho
UNahomi 1: 7 “Ulungile uThixo, uligwiba ngemini yembandezelo; uyabazi abo bakholose ngaye ”.
UThixo ulungile kwaye le nto into besiyayazi ukusukela besincinci ngoba ecaweni besisoloko sixelelwa ngoThixo onobubele kwaye ikwayinto enye leyo elungileyo esenza sihlale simile kwanaxa sidlula kumaxesha axa siziva sityhafile. Ungumnakekeli wethu kunye nesikhokelo sethu.
13. Landela umendo weNkosi yethu
ISityhilelo 21: 4 “Azisule uThixo zonke iinyembezi emehlweni abo; kungabikho kufa, kungabikho kulila, nakukhala, nantlungu; kuba izinto zokuqala zenzekile. ”
Sinesithembiso sokuba le nkosi iya kuzisula iinyembezi zethu kwaye liyeza ixesha apho kungasayi kubakho xesha lokuziva lusizi, lilodwa, kusenkangala, buthathaka okanye ngaphandle kwesibindi, kodwa ukuba iyakuba kukuphumla kwethu. Masingahambi kude kuye kwaye uya kusinyamekela kwaye anelise ngamandla akhe.
Ndiyathemba ukuba uyonwabele iivesi zethu zebhayibhile zokhuthazo lwamaxesha obunzima.
Funda kwakhona eli nqaku unyana wolahleko y Iivesi eziyi-11 zothando lukaThixo.